Kiraa Maashinoota Daandii | | Tenders in Ethiopia
Kiraa Maashinoota Daandii
Botor Tolay Road Authority
Caalbaasii Kiraa Maashinoota Daandii
Godina Jimmaatti Abbaan Tayitaa Daandiwwanii Aanaa Botor Xoollayi bara baajata 2013 caalbaasii baasuun maashinootaa kireeffatee hojii daandii cirracha uwwisuu hojjechiisuu barbaada. Kanaafuu, namoonni ulaagaa ibsame guuttan dorgomuu ni dandeessu
Gosoota Maashinaroota barbaachisan
Doosen 2015 fi isa ol
Cut/costu/140H 2009 fi isaa ol
SMG 2015 fi isaa ol
1. Dorgomaan Eeyyama daldalaa seera qabeessa ta’e galmeessaa eeyyama daldalaa dirqama kaffaltii gibiraa ykn TIN no eeyyamaa daldalaa isaanii kan haaroomse fi raga isaanii asiliifi kooppii isaa waliin dhiheessuu kan danda’anu ta’u qaba.
2. Dorgomtoonnii Waraqaa raga tarreeffama dhiheesitoota keessatti galmaa’uu isaanii kan mirkaneessu raga dhiiheessu qaba.
3. Dorgomtoonnii kaffaltii dabalataa qabeenyaa VAT kan galmaa’anii fi raga isaa asilii fi koppii waliin mirkaneessu dhiheessu qabu.
4. Mashinichi dullomaa kan hin tanee raga gutuu qabachuu.
5. Dorgomtoonnii kabachiisa caalibaasiif kan oolu qarshii 50,000 (kuma Shantaamaa) baankii beekamaa irraa CPOn qophaa’ee invilooppii tokkoon saamsani dhiyeesuu qabu.
6. Mashinichi Sa’aattii hojiidhaf baarbadamee sa’aattii 360 (dhibba sadiif Jahaatama.)
7. Kaffaltiin jalqaaba kan kaffalamuu ergaa mashinii galee wal-galtee godhamee booda.
8. Doorgamaan kamiyyuu yeroo doorgomif dhiyaatuu waraqaa Abbaa qabeenyummaa / bakka bu’insaa/ seera qabeessaa ta’ee koppiif Orjinaalaa dhiyessuu kan daanda’uu.
9. Dorgomaan ergaa mo’atee boodaa wal-galtee mallattesse turtii guyyaa 5( shan) keessattii bakka baarbadametti dhiyessuu qaba.
10. Doorgamaan Mo’atee guyyaa wal-galtee jedhamee kessattii yoo dhiyachuu batee qarshi qabsifamee motummaf galii ta’ee dorgomaan kunis kan itti gafaatamuu ta’a.
11. Mashiniichi hojii egaalee yoo midhaamee /rakkoo tekinikaa/yoo irraa gahee abbaan mashinichaa ykn dhabbatichii turtii guyyaa 2-3 hin calee kessattii suphisiisee hojiitti deebisuu qaba. Mashinichi rakko humnaa ol yoo ta’ee turtii guyyaa 5(shan) kessattii guutumaan guututti jijjiruu qaba.
12. Doorgamaan Caalbasii Moo’atee kaffaltii walgalaa irraa %2 kan kaffaluu ta’a.
13. Sanada caalbaasii teekinikaafi faayinashaalli isaanii kooppii lamaan qoba qobaatti qopha’ee postaa qobaatti saamsame orijiinaalaa fi kooppii jeedhamee barreeffamee postaa haadhoo tokko keessatti saamsame dhiyaachu qaba.
14. Dorgomaan tokko sanada caalbaasii lamaa ol bitachuu hin danda’u.
15. Dorgomttoonnii sanada caalbaasii guyyaa 15/04/2013 irra eegalee hanga 5/05/2013tti yeroo hojii motummaa walitti aanan 15(kudha shan) keessatti qarshii hin deebine 100 (dhibba tokko) kaffaluun waajjiraa Abba Taayita Galiwwaanii Aannaa Bootor Xoollaay irraa bitachuu ni danda’u.
16. Caalbaasichii guyyaa 05/05/2013 dorgomttoonnii ykn bakka bu’aan isaanii bakka argameetti sa’atii 4:00 irratti sanduuqni caalbaasii cufamee guyyaadhuma kana sa’aatii 4:30 irratti kan banamu ta’a.
17. Huubachisaa:- W/richii caalbaasicha carraa biroo yoo argatee gar tokkeen YKN gutumaa gutuutti haquuf mirgi isaa eegamadha.
Oddeffannoo dabaalaatattif:- Lakk bilbila 0917202107/0920077800 Abbaan Tayitaa Daandiwwanil Aanaa Botor Xoollayi.